Miatrika fanoherana ny fananganana ny tempoly Haindò voalohany ao Islamabad · Global Voices teny Malagasy
"Manome zo mitovy ho an'ny olom-pirenena rehetra ny lalàm-panorenan'i Pakistan"
Voadika ny 02 Febroary 2021 5:13 GMT
Umarkot Shiv Mandir ao Umarkot, Sindh, Pakistan. Sary tao amin'ny WIkipedia avy amin'i Harish Chander, CC BY-SA 4.0.
Tamin'ny 24 Jona, nanatrika ny lanonana fanokafana ny fananganana ny tempoly Haindò voalohany tao Islamabad ny sekretera parlemantera Pakistaney misahana ny Zon'olombelona Lal Chand Malhi. Saingy, noravan'ny Islamista izany raha vantany vao nanomboka ny fananganana ny rindrina ary nisy ny fanangona-tsonia nataon'ny vondrona mpitondra fivavahana hanoherana ilay tempoly.
Fanamelohana ataon'ny vondrona mpitondra fivavahana
Amin'ireo mponina tombanana ho miisa 221 tapitrisa monina ao Pakistan, maherin'ny 96% no Silamo ary manodidina ny 1.85% no Haindò – na dia nilaza aza ny Filankevitra Haindò Pakistaney fa ambony kokoa ny isa farany.
Raha ny filazan'ny Evacuee Trust Property Board, sampan-draharahan'ny Governemanta Pakistaney dia manodidina ny 1.300 ny tempoly ao amin'ny firenena ary 30 ihany no heverina fa miasa ankehitriny. Natao hanomezana toerana ny mpikambana miisa 3.000 ao amin'ny vondrom-piarahamonina Haindò any Islamabad hanaovan'izy ireo lanonana ara-pivavahana, mariazy, fombafomba farany sy ny fandoroana faty ny fananganana an'io tempoly vaovao io.
Tamin'ny faran'ny volana Jona, nanaiky ny fanomezana vola mitentina 100 tapitrisa ropia (598.000 dolara amerikana) hananganana ny tempoly Shri Krishna Mandir ny Praiminisitra Pakistaney Imran Khan. Nahazo tsikera maro ilay fanapaha-kevitra hanangana tempoly tao Islamabad. Nanohitra ilay fanapaha-kevitra ny mpitondratenin'ny antenimiera ao Punjab , Chaudhry Pervaiz Elahi na dia mpikambana ao amin'ny fiaraha-mitantan'ny governemanta aza izy. Namoaka fanambarana ny Jamia Ashrafia, toeram-piofanana ara-pinoana malaza any Lahore fa tsy araka ny finoana Islamika ny fananganana ary namoaka fatwa (didim-pivavahana) hanoherana izany izy ireo. Nanampy ny Mufti Muhammad Taqi Usmani, manam-pahaizana manokana momba ny lalàna Islamika fa tsy ny fananganana ilay trano no olana fa ny olona nanome ny vola hanaovana izany.
Nanakana ny fanamboarana tamin'ny 4 Jolay 2020 ny Manampahefana misahana ny Fampandrosoana ao an-dRenivohitra (CDA) any Islamabad noho ny antony araka ny filazany fa tokony ho ankatoavina ho drafi-pananganana izany. Nandritra izany fotoana izany, nisy vondrona fatra-pandala ny finoana Islamika nandrava ny rindrin'ny tempoly, nihirahira ny teny filamatra ara-pinoana ary nanonona ny Azan (antso hanao vavaka) teo an-tokotanin'ny tempoly.
Noravana ny rindrin'ny Tempoly ary misy lehilahy miteny ny Azan eo amin'ilay toerana ankehitriny.
Tsy misy ifandraisany amin'ny fialan-tsiny amin'ny hetra, sns. Fijerena ratsy atao amin'ny Haindò izao.
Omeo ny hafa izay angatahinao ho anao!
Mitory fandeferana ny Islamo.
Nandà ny fangatahana nataon'ny vondrona mpitondra fivavahana Miozolomana ny Fitsarana Avo ao Islamabad ary nametraka ny raharaha tany amin'ny Filankevitry ny Fotokevitra Islamika (CII), rafitra ara-dalampanorenana iray natsangana tamin'ny taona 1962 mba hitarika ny fanjakana amin'ny fomba fitantanana ny firenena mifanaraka amin'ny baikon'ny Korany Masina sy ny Sharia. Manontany ny hevitry ny CII ny Fanjakana rehefa mila torohevitra araka ny lalàna momba ny raharaha Islamika.
Nangataka ny torohevitry ny CII ihany koa ny Ministeran'ny Raharaham-pivavahana (MORA) momba ny famatsiam-bola avy amin'ny volan'ny mpandoa hetra Miozolomana, hananganana ny tempoly. Naharay ny taratasin'ny minisitera ny filohan'ny CII Qibla Ayaz ary nandefa izany tany amin'ny vaomieran'ny sampam-pikarohana mba hilazan'izy ireo ny heviny. Tsy afaka manomboka ny fananganana ny tempoly raha tsy manaiky ny fanapahan-kevitra ny CII.
Fanohanana ny fananganana ny tempoly
Nisioka ho fanohanana ny fananganana ny tempoly i Noor ul Haq Qadri avy ao amin'ny Minisiteran'ny Raharaham-pivavahana sy ny Firindran'ny Fampiraisam-pinoana:
Fandikan-teny: Afaka mivavaka malalaka ny vitsy an'isa rehetra araka ny tantara sy ny fanabeazana ary ny lalàm-panorenana Islamika ao Pakistan ary hiaro azy ireo ny fanjakana. Tsy hitondra azy ireo tahaka ny fanaon'i India amin'ny vitsy an'isa ny PM Imran Khan.
Nilaza ny fihetsem-pony toy izao i Lal Chand Malhi, mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena izay nitarika ny lanonana fametrahana fototra ny tempoly, tamin'ny resadresaka an-telefaonina:
Tsy misy mahasakana antsika amin'ny fananganana ny tempoly raha araka ny lalàm-panorenana ao Pakistan sy ny lalànan'ny firenena. Ny hany olana amin'izao fotoana izao dia ny hoe azo atao ve ny manao izany amin'ny volam-bahoaka sa tsia izay nandefasana fangatahana tany amin'ny CII. Fa raha tsia ny valiny dia mbola hatsangantsika izany aorian'ny fanangonana vola.
Raha ny filazan'ilay manam-pahaizana momba ny fivavahana Javed Ahmed Ghamidi, mandoa hetra avokoa ny Pakistaney rehetra ary manangana moskea amin'ny alàlan'ny volam-bahoaka ny fanjakana ka tokony afaka hampiasa volam-bahoaka ihany koa ny governemanta hananganana toeram-pivavahana ho an'ny fivavahana hafa.
Javed Ahmed Ghamdi momba ny fananganana ny Tempoly Haindò any Islamabad. Mankatoa ny fototra mametraka ny firenena laika izy eto, fa tsy miaro ny Repoblika Islamika.
Nanamafy tao amin'ny Antenimieram-pirenena amin'ny voalazan'ny lalàm-panorenana ao Pakistan i Khawaja Asif, mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra Ligy Miozolomana Nawaz (PML-N) ao Pakistan, indrindra fa ny fampiharana ny zo mitovy ho an'ny “olom-pirenena rehetra na inona na inona saranga, foto-pinoany ary ny fivavahany.”
Nitsikera ireo izay nanasarotra ny raharaha ny Filankevitra Ulema ao Pakistan ary nanohana ny fananganana ny tempoly satria mazava ny Lalàm-panorenan'i Pakistan momba ny zon'ny Miozolomana sy ny tsy Miozolomana monina ao amin'ny firenena.
Resabe ny tao amin'ny tambajotra sosialy hatramin'ny andro nankatoavan'ny Praiminisitra ny fananganana ny tempoly. Nidera ny fanapaha-kevitra ny olona sasany raha toa kosa nanohitra izany ny antokom-pivavahana ary nisy mihitsy aza nandrahona ny hamono olona ao amin'ny vondrom-piarahamonina Haindò. Nalaza be ny tenirohy #MandirTauBanega (Hatsangana ny Tempoly).
Tongasoa ny fananganana ny tempoly Haindò voalohany ao Islamabad ary mendri-piderana ny dingana avy amin'ny Governemanta. Mitovy ny olom-pirenena tsirairay na inona na inona sarangany, fivavahany, foko niaviany na finoany i Pakistan .
Nanao fampielezan-kevitra nanohitra ny fananganana ny tempoly ny fantsom-baovao tsy miankina iray ary namoaka lahatsoratra izy ireo nilaza fa mirehareha amin'ny fandreseny rehefa nijanona ny fananganana.
Maharikoriko sy mahamenatra ny filazan'ny @92newschannel izany ho fandreseny rehefa najanon'ny CDA fananganana tempoly Haindò ao Islamabad. Tsotra, satria miandany sy mampiroborobo fijerena vilana fanavakavahana ny Henatrahoanny92News. Izany no Pakistan an'i Jinnah fa tsy Pakistan an'i mullah.